.:: IT WEB CRAZY BOY ::.: jetAudio Music Player Plus for Android
Android ဖုန်းတွေမှာ သီချင်းတွေ နားထောင်မယ်ဆိုရင် ဒီ jetAudio Music Player Plus လေးကလည်း တော်တော်လေးကို
ကောင်းပါတယ်။ Audio ဖော်မက် တော်တော်များများကို အသံကွာလတီကောင်းကောင်းနဲ့ ဖွင့်ပြီး နားထောင်နိုင်ပါတယ်...။
ဒါ့အပြင် Equalizer တွေလည်း 32 မျိုးကျော်ပါတဲ့အတွက် သီချင်းတွေကို Rock, Pop စတဲ့ ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ ပုံစံမျိုးတွေနဲ့
ရွေးပြီး နားထောင်လို့ရတယ်။ ဒီ Plus Version လေးက Features တော်တော်လေးစုံပါတယ်။ အပြည့်အစုံ သိချင်တယ်ဆိုရင်
Google Play မှာ သွားပြီး လေ့လာကြည့်ပါ။ စမ်းပြီး သုံးကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ အောက်မှာ ဒေါင်းယူသွားနိုင်ပါတယ်။
Download: jetAudio Music Player Plus for Android
Version : 3.6.0 | Size: 14 MB
Screenshot More >>
Posted by Thurainlin at 07:51